1 Madzimambo 20 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
1 Madzimambo 20:1-43
20 Zvino Bheni-hadhadhi+ mambo weSiriya akaunganidza mauto ake ose ehondo nemadzimambo makumi matatu nemaviri aaiva nawo+ nemabhiza+ nengoro,+ akaenda, akakomba+ Samariya,+ akarirwisa. 2 Akabva atuma nhume+ kuna Ahabhi mambo waIsraeri aiva kuguta. Akati kwaari: “Zvanzi naBheni-hadhadhi, 3 ‘Sirivha yako nendarama yako ndezvangu, madzimai ako nevanakomana vako, vakanaka kwazvo, ndevangu.’”+ 4 Mambo waIsraeri akapindura akati: “Ndiri wenyu pamwe chete nezvinhu zvangu zvose sezvamataura, ishe wangu mambo.”+ 5 Gare gare nhume dzacho dzakadzoka dzikati: “Zvanzi naBheni-hadhadhi, ‘Ndakakutumira shoko ndichiti: “Uchandipa sirivha yako nendarama yako nemadzimai ako nevanakomana vako. 6 Asi panenge panguva ino mangwana ndichatuma vashandi vangu kwauri, vachanyatsotsvaka mumba mako nedzimba dzevashandi vako; uye vachatora zvose zvinofadza+ maziso ako nemaoko avo, voenda nazvo.”’” 7 Mambo waIsraeri akabva ashevedza varume vakuru vose vomunyika yacho+ akati: “Ndapota, cherechedzai muone kuti munhu uyu ari kutsvaka dambudziko;+ nokuti akatumira shoko kuti atore madzimai angu nevanakomana vangu nesirivha yangu nendarama yangu, uye handina kuramba nazvo.” 8 Varume vakuru vose nevanhu vose vakabva vati kwaari: “Musateerera, uye musabvuma.” 9 Naizvozvo akati kunhume dzaBheni-hadhadhi: “Itii kunashe wangu mambo, ‘Ndichaita zvose zvamakatumira mushandi wenyu pakutanga; asi chinhu ichi handikwanisi kuchiita.’” Nokudaro nhume dzacho dzakaenda dzikadzoka neshoko kwaari. 10 Zvino Bheni-hadhadhi akamutumira shoko akati: “Vanamwari+ ngavandiitire saizvozvo, uye ngavawedzere pazviri saizvozvo,+ kana guruva reSamariya richizokwana kuti munhu wose anonditevera anokore tsama!”+ 11 Mambo waIsraeri akapindurawo akati: “Imi, taurai naye kuti, ‘Uya ari kusungira+ zvokurwa nazvo ngaarege kuzvirumbidza souya ari kuzvisunungura.’”+ 12 Paakangonzwa shoko iri, iye nemadzimambo acho pavakanga vachinwa+ vari mumatumba, akabva ati kuvashandi vake: “Gadzirirai!” Ivo vakatanga kugadzirira kuti varwise guta racho. 13 Zvino mumwe muprofita akaswedera kuna Ahabhi mambo waIsraeri+ akabva ati: “Zvanzi naJehovha,+ ‘Waona boka guru revanhu iri rose here? Tarira ndichariisa muruoko rwako nhasi, uye uchaziva kuti ndini Jehovha.’”+ 14 Ahabhi akabva ati: “Muchishandisa ani?” iye akati: “Zvanzi naJehovha, ‘Ndichishandisa majaya emachinda ematunhu.’” Akazoti: “Ndiani achatanga kurwa kwacho?” iye akati: “Ndiwe!” 15 Zvino akaverenga majaya emachinda ematunhu, akava mazana maviri nemakumi matatu nemaviri;+ uye akazoverenga vanhu vose, vanakomana vaIsraeri vose, zviuru zvinomwe. 16 Vakatanga kubuda masikati Bheni-hadhadhi paakanga achinwa achidhakwa+ ari mumatumba, iye pamwe chete nemadzimambo acho, madzimambo makumi matatu nemaviri akanga achimubatsira. 17 Majaya+ emachinda ematunhu acho paakatanga kubuda, Bheni-hadhadhi akabva atuma nhume; uye dzakauya dzikamuudza, dzichiti: “Kune varume vabuda muSamariya.” 18 Iye akati: “Kunyange vabudira rugare, vabatei vari vapenyu; kana kuti kunyange vabudira kurwa, imi vabatei vari vapenyu chete.”+ 19 Ava ndivo vakabuda muguta, majaya emachinda ematunhu acho nemauto ehondo aiva shure kwawo. 20 Zvino mumwe nomumwe akatanga kuuraya munhu wake; vaSiriya+ vakatiza,+ uye vaIsraeri vakavatevera, asi Bheni-hadhadhi mambo weSiriya akatiza ari pabhiza pamwe chete nevatasvi vemabhiza. 21 Asi mambo waIsraeri akabuda, akaramba achiparadza mabhiza nengoro,+ uye akauraya vaSiriya vakawanda kwazvo. 22 Gare gare muprofita+ wacho akaenda kuna mambo waIsraeri akati kwaari: “Enda unova nesimba,+ ucherechedze uye uone zvauchaita;+ nokuti pakutanga kwegore mambo weSiriya achauya kuzokurwisa.”+ 23 Zvino vashandi vamambo weSiriya vakati kwaari: “Mwari wavo ndiMwari wemakomo.+ Ndokusaka vakatikunda. Naizvozvo ngatirwei navo panyika yakati sandara, tione kana tisingazovakundi. 24 Itai chinhu ichi: Bvisai madzimambo acho,+ mumwe nomumwe panzvimbo yake, muise magavhuna panzvimbo dzawo.+ 25 Imi verengai uto rehondo rakaenzana neuto renyu rehondo rakafa, bhiza panzvimbo yebhiza, ngoro panzvimbo yengoro; uye ngatirwei navo panyika yakati sandara, tione kana tisingazovakundi.”+ Naizvozvo akateerera inzwi ravo akaita saizvozvo. 26 Zvino pakutanga kwegore Bheni-hadhadhi akaunganidza vaSiriya,+ akaenda kuAfeki+ kuti anorwa naIsraeri. 27 Vanakomana vaIsraeri vakanga vaunganidzwa vakapiwa mbuva,+ vakatanga kubuda kuti vasangane navo; uye vanakomana vaIsraeri vakadzika musasa pakatarisana navo vakaita semapoka maviri maduku embudzi, vaSiriya zvavakanga vakazadza nyika yose.+ 28 Munhu waMwari wechokwadi+ akabva aswedera pedyo akataura namambo waIsraeri, akati: “Zvanzi naJehovha, ‘Nokuti vaSiriya vati: “Jehovha ndiMwari wemakomo, haasi Mwari wemapani,” ndichaisa boka guru revanhu rose iri muruoko rwako,+ uye imi muchaziva kuti ndini Jehovha.’”+ 29 Vakaramba vakadzika musasa kwemazuva manomwe, ava vari pakatarisana neavo.+ Pazuva rechinomwe kurwisana kwakatanga; vanakomana vaIsraeri vakauraya vaSiriya, varume vaifamba netsoka zviuru zana pazuva rimwe chete. 30 Vaya vakanga vasara vakatizira kuAfeki,+ kuguta; rusvingo rukawira varume zviuru makumi maviri nezvinomwe vakanga vasara.+ Asi Bheni-hadhadhi akatiza,+ akazopinda muguta, muimba yomukatikati.+ 31 Naizvozvo vashandi vake vakati kwaari: “Tarirai zvino, takanzwa kuti madzimambo eimba yaIsraeri madzimambo ane mutsa worudo.+ Tapota, regai tisunge masaga+ muzviuno+ zvedu uye tisunge tambo mumisoro yedu, tiende kuna mambo waIsraeri. Zvichida achachengetedza mweya wenyu uri mupenyu.”+ 32 Naizvozvo vakasunga masaga muzviuno zvavo, vakasunga tambo mumisoro yavo, vakapinda maiva namambo waIsraeri vakati: “Zvanzi nomushandi wenyu Bheni-hadhadhi, ‘Ndapota, regai mweya wangu urarame.’” Iye akati: “Achiri mupenyu here? Iye ihama yangu.” 33 Naizvozvo varume+ vacho vakafunga kuti inenji, vakakurumidza kufunga kuti ndizvo zvaazvisarudzira, vakati: “Bheni-hadhadhi ihama yenyu.” Iye akati: “Endai munomutora.” Bheni-hadhadhi akabva abuda akaenda kwaaiva; uye akabva amuita kuti akwire mungoro.+ 34 Zvino Bheni-hadhadi akati kwaari: “Ndichadzosa maguta+ akatorwa nababa vangu kuna baba vako; uye uchazviitira migwagwa muDhamasiko sezvakaita baba vangu muSamariya.” Ahabhi akati: “Ini ndichakurega uchienda kana taita sungano.”+ Naizvozvo akaita sungano naye, akamurega achienda. 35 Zvino mumwe murume wevanakomana vevaprofita+ akati kushamwari yake arayirwa+ naJehovha: “Ndapota, ndirove.” Asi murume wacho akaramba kumurova. 36 Naizvozvo akati kwaari: “Nokuti hauna kuteerera inzwi raJehovha, tarira uri kubva kwandiri, uye shumba ichakuuraya.” Pashure paizvozvo akabva kwaari, shumba+ ikamuwana, ikamuuraya.+ 37 Akawana mumwe murume akati: “Ndapota, ndirove.” Naizvozvo murume wacho akamurova, akamurova akamukuvadza. 38 Muprofita wacho akabva aenda, akanomirira mambo pedyo nomugwagwa, akaramba akazvisunga kumaziso kwake nejira kuti arege kuzivikanwa.+ 39 Zvino mambo zvaakanga achipfuura, akashevedzera kuna mambo akati:+ “Mushandi wenyu akaenda kwainyanya kurwiwa; uye tarirai! kwaiva nomumwe murume aibva kwairwiwa, akauya nomumwe murume kwandiri akabva ati, ‘Rinda murume uyu. Kana akangoshayikwa chete, mweya wako+ uchatsiva mweya wake,+ kana kuti zvimwe ucharipa netarenda resirivha.’+ 40 Zvino mushandi wenyu paakanga achishanda pano nepapo, iye akabva anyangarika.” Mambo waIsraeri akati kwaari: “Ndizvo zvauchatongerwa. Wazvitonga pachako.”+ 41 Akabva akurumidza kubvisa mucheka pamaziso ake, mambo waIsraeri akamuziva, kuti aiva wokuvaprofita.+ 42 Zvino akati kwaari: “Zvanzi naJehovha, ‘Nokuti wakarega murume wandakatsaura kuti aparadzwe+ achibva muruoko rwako, mweya wako uchatsiva mweya wake,+ uye vanhu vako vachatsiva vanhu vake.’”+ 43 Mambo waIsraeri akabva aenda akananga kumba kwake, akafundumwara uye akasuruvara,+ akasvika kuSamariya.+
1 Madzimambo 20